Uncategorized Archives - Daraundi Gorkha's No. 1 Newspaper Daraundi Gorkha's No. 1 Newspaper
यस महिना मनास्लु हिमाल आरोहणका लागि बाटो तयारी भएको छ । शुक्रबार विहान पाँच जना शेर्पा गाइडको टोलीले चुचुरोसम्म डोरी टाँगेर बाटो तयारी सम्पन्न गरेको छ । आरोहण मार्ग निर्माणको
गोरखामा अहिले बिभिन्न तीन ठाउँबाट मतदाता नामावली संकलनको काम चलिरहेको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय, ईलाका प्रशासन कार्यालय सिर्दिबास र जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा मतदाता नामालवी संकलन चलिरहेको जिल्ला निर्वाचन अधिकारी
आषिशकुमार भट्ट: गोरखा सदरमुकाम देखि नारेश्वर जाने सडक हिलाम्य छ । सडक हेर्दा लाग्छ त्यो सडक हो वा खहरे खोला ! सडकमा साना सवारी साधन गुड्न सक्दैनन् । पैदल यात्रीलाई
गोरखा जिल्ला अदालतले मुद्धा फैसला भएर फरार रहेका बिभिन्न मुद्धाका अभियुक्तहरुबाट १४ करोड ८५ लाख रुपैयाँ असुलउपर गर्न बाँकी छ । जिल्ला अन्यायधीश दिनबन्धु बरालका अनुसार १७ करोड सात लाख
गोरखामा बाल यौनजन्य दुव्र्यवहारको घटना बढेको अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) ले निश्कर्ष निकालेको छ । जनवरी १ देखि जुलाई १५ सम्म १४ जना बालिकाहरु र ५ महिलाहरु यौन दुव्र्यवहारको
चुमनुब्री गाउँपालिकाको केन्द्र फिलिम लगायत आसपासमा बिगत १० दिनदेखि अबरुद्ध टेलिफोन सेवा सञ्चालनमा आएको छ । गत जेठ २ गतेदेखि अबरुद्ध रहेको स्काइ प्रविधिको मोबाइल सेवा शुक्रबारबाट सञ्चालनमा आएको चुमनुब्री
दुईवटा बाहेक गोरखाका सबै पालिकाको बजेट अधिवेशन(गाउँसभा) सम्पन्न भएको छ । दुर्गमता, बाढी पहिरोको सकस, सञ्चार सम्पर्क बिच्छेद तथा अन्य प्राविधिक कारणले चुमनुब्री गाउँपालिकाको सभा हुन सकेन । गाउँपालिकाका प्रमुखलाई
ग्लोबल गोरखा समाजद्वारा भिमसेनथापामा चार थान अक्सिजन कन्सनट्रेटर सहयोग
ग्लोबल गोरखा समाजले भिमसेन थापा गाउँपालिकालाई चार थान अक्सिजन कन्सनट्रेटर सहयोग गरेको छ । गोरखाका जिल्लाका ११ वटा स्थानीय तहका बिभिन्न ४० स्वास्थ्य संस्थामा कन्सनट्रेटर सहयोग गरेको समाजले बुधवार भिमसेन
दरौँदीले जेसिबी बगायो
दरौँदी नदीमा आएको बाढीले ग १ क ४१९३ नमबरको (जेसिभी) ब्याकुलोडर बगाएको छ । मध्येपहाडी लोकमार्गको नयाँ साँघु खण्डमा ग्राबेल उठाउन प्रयोग गरिएको जेसिभी गएराती बगाएको हो । ब्याकुलोडर बाढीले
नेपाली काङ्ग्रेस गोरखाले सदरमुकामस्थित पार्टी कार्यालयको भबन कोभिड बिरामीलाई उपचार गर्न आइशोलेसन बनाउन दिने भएको छ । ठाउँ अभावका कारण कोरोना संक्रमितलाई अस्पतालको आँगनमा राखेर उपचार गर्नुपर्ने अवस्था भएकाले गोरखा